Mid ka mid ah Computer si wadaag Music dhexdooda Multiple iPhone, iPad, iPod Devices
> Resource > iPhone > Sida loo Isticmaalo One Computer si wadaag Music in Multiple iPhone, iPad, iPod iyo
"Halkan waa waxa. Haddaba qoyskeyga waxaan leenahay labo iPhone iyo iPod cusub iibsaday gabadhayda. Waxaan doonayaa inaan u dhigay qaar ka mid ah sheekooyinka caruurta iyo music on iPod ah. Ma jiraan hab fudud oo taas loo sameeyo computer la keliya? Ma waxaan u leeyihiin in ay ka sameysataa xisaab kale Lugood? "
Si aad u noqoto qof daacad ah, samaynta xisaab gaar ah Lugood waa hab si ay u wadaagaan music ka mid computer qalabka iPhone, iPad, iPod oo badan. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan hab wanaagsan. Abuuritaanka xisaab badan Lugood dhigan tahay info dheeraad ah si loo buuxiyo iyo sirta ah in la xasuusto. Dhab ahaantii, waxaa jira hab fiican oo fudud si ay ula wadaagaan music ka mid computer qalabka iPhone, iPad, iPod oo kala duwan - isku day TunesGo Wondershare. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad music ka mid computer wareejiyo iPhone kala duwan, iPad, iPod oo si toos ah. Markasta oo kaliya in 3 tallaabo, waxaadna ku gaari doonaa goolka.
Download iyo rakibi TunesGo saxda on your computer. Labada TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. In socda, waxaan qaadi version TunesGo Windows sida tusaale in laga hadlo sida loo isticmaalo ka mid computer si ay u wadaagaan music inay iPhone badan, iPad, iPod iyo.
Fiiro gaar ah : Labada TunesGo Windows iyo versions Mac taageeraan iPhone, iPad, iPod iyo taaban socda ee macruufka 5 ama ka dib (ee macruufka dambeeyay 9 ka mid ah). Ka sokow, TunesGo (Windows) taageertaa iPod nano, classic iPod, iyo iPod shaandheyn iyo sidoo.
Tallaabada 2. Connect iPhone / iPad / iPod la PC
Connect iPhone / iPad / iPod la your computer iyo abuurtaan TunesGo. TunesGo ogaan doonaa qalab aad iyo muujiyaan ay info uu furmo suuqa ugu weyn. Ka dibna riix Media ee Murayaad daaqadda bidix. By default, suuqa kala cusub ee la soo dhisay dabamariyay yahay suuqa kala Music. Laga soo bilaabo halkan, heesaha oo dhan ku qalab aad taas oo aad ku xiran PC waxaa lagu soo bandhigaa.
Tallaabada 3. music Transfer ka computer / Lugood si iPhone / iPad / iPod
Daaqadda Music ah, waxaad riixi kartaa dar si ay u gudbiyaan doonayay songs computer ama Lugood in qalab . Waa quruxsan fudud oo fudud. Ku dar haddii aad ku xiran ayaan laba qalabka mar kasta oo, aad la wadaagi karto music u dhaxeeya. Dooro heeso aad rabto in lagu wareejiyo on hal qalab oo guji xagal ka yar "Dhoofinta in" in mid ka mid ah qalab lagu wareejiyo music in kale.
Iyadoo TunesGo, aad marna ka walwalin doonaa oo ku saabsan sida loo isticmaalo kombiyuutar si ay u gudbiyaan music inay iPhone badan, iPad, iPod iyo. Waxaad ku samayn kartaa adiga oo aan ku xirid ah.
Isku day TunesGo in ay isticmaalaan hal computer si ay u wadaagaan music qalabka kala duwan.